30 Bogagga Websaydhka ee cajiibka ah | Abuurista khadka tooska ah
Manuel Ramirez | | General, Dhiirrigelinta
Qaar ka mid ah bogagga ugu caansan waxaa si aad ah u buux dhaafiyay macluumaad, laakiin waxaan door bidaa ka soo horjeedka: kuwa fudud.
Sida iska cad qayb weyn ee kooxdani waa Google oo leh boggeeda ugu yar tan iyo markii ay safarkooda bilaabeen, laakiin si cad maahan kan kaliya ee internetka ka go'an in waxyaabaha la fududeeyo.
1 Tusaalooyinka bogga fudud ee HTML
1.2 Alice dugaag
1.5 Naqshad ka duwan
1.6 degdeg ah
1.7 Naqshadaynta Beerta Dheer
1.9 Ku raaxeyso tani
1.13 Xeebaha badda ee xarrago leh
1.22 Suuq Istuudiyaha Macallinka ah
2 Sida loo abuuro degel fudud HTML
2.1 Xoogaa CSS
Tusaalooyinka bogga fudud ee HTML
Kean Richmond wuxuu naga dhigayaa inaan aragno fududaanta ku ciyaarista waxyaabo yar yar, laakiin si aad u wanaagsan ayaa loo dhigay dareen weyn siiya yaraanta. Astaamihiisa bidix ee sare, Twitter iyo astaamaha xiriirka ee midigta iyo bartamaha, oo leh qaabab la yaab leh, waxa uu u heellan yahay.
Xiriirinta shabakadda: Keanrich mond
Alice dugaag fudeyd sidoo kale astaantaada la dhigo xarunta dhexdeeda, afar tab si aad ugu dhex wareegto bogagga ugu muhiimsan ee boggaaga iyo sawirro isdaba-joog ah oo si habboon loo dhigay si markaa jalleec ahaan aan u ogaanno waxaad qabato iyo waxaad samaynayso.
Xiriirinta shabakadda: Alice dugaag
Ogden ku sii ciyaar sida magacaagu u fudud yahay astaan ​​ahaan, shabakadaha bulshada ee ku yaal meel hoose oo aan soo jiidan dareenka iyo naqshadayntoodu way shaqeysaa si aan si dhakhso leh ugu dhex marno. Hal bog wuxuu ku muujinayaa wax kasta oo muhiim ah.
Xiriirinta shabakadda: Jonathan ogden
Finch waxay horeyba u aadeysaa meelo kale oo ay ku ciyaareyso far qorista iyo kuwa midabyo tilmaamaya xarrago iyo xigmad waxa ay qabato. Iyada oo kaliya xubno yar, wuxuu ka tegayaa dhammaan xirfaddiisa aragtida. Waxay sidoo kale cadeynaysaa bogagga adiga kugu xiran.
Xiriirinta shabakadda: Finch
Naqshad ka duwan
Degelkan ciyaaro si ka duwan. Adeegso warqad darbi ah oo leh cinwaan cinwaan ah oo aan uga bixi karno bogagga muhiimka ah, taleefankaaga iyo xiriiriyeyaasha shabakadahaaga bulshada.
Xiriirinta shabakadda: Naqshad ka duwan
Kai wuxuu noo sawirayaa shaxdiisa oo leh saddexagal aan la taaban karin iyo midab midab leh oo ku habboon si loo siiyo isu dhowaansho. Waxa kale oo uu bixiyaa qayb ka mid ah taariikh nololeedkiisa oo leh font yar oo xajmi ah haddii aan dooneyno inaan wax badan ka ogaanno isaga.
Xiriirinta shabakadda: degdeg ah
Naqshadaynta Beerta Dheer
Sida tii hore, Naqshadaynta Beerta Vertical waxay u socotaa sawir muujinaya dhakhso mid ka mid ah shaqooyinkii ugu wanaagsanaa ee uu ka qabtay garoonka diyaaradaha Oslo. Xagga sare waxaan ku leenahay cinwaanka cinwaanka «nav bar» ama bar navigation iyo xitaa suurtagalnimada in la beddelo luqadda. Astaantu waxay ku dhejineysaa qaab toosan si ay u siiso taabashada ugu dambeysa bog aad u fudud.
Xiriirinta shabakadda: Naqshadaynta Beerta Dheer
247Grad ku ciyaar monochrome iyo muuqaal asal ah gebi ahaanba mugdi. Font-ka madaxa, oo ka yar qoraalka iyo cinwaanka, waa la weyneeyay si loo abuuro farqi weyn qaabka guud.
Xiriirinta shabakadda: 247Grad
Ku raaxeyso tani
Una makiinad qorista weyn waxay noqon kartaa calaamadaha lagu kalsoonaan karo iyo inaan ognahay waxaan sameyno. Uma baahnid inaad bixiso wax intaa ka badan haddii farriintu toos tahay. Waxay si cad u sheegaan: waxay jecel yihiin inay abuuraan barnaamijyo qurux badan iyo degello internet ah. Waxay uga tagayaan boostada mashaariicda iyo waxbarashadooda xiriir kale.
Xiriirinta shabakadda: Ku raaxeyso tani
Allison ayaa na qaadata ka hor koorsooyinka kale oo ay ku jiraan sawirro badan iyo in ka sii badan "dheddig" Waxaa la mid ah sawirkaaga guud iyo madaxaas. Wuxuu leeyahay raaxada soo bandhigida kaar muujinaya tabaha wax iibsiga.
Xiriirinta shabakadda: Allison hou
Pixelot xoogaa waa waalan yahay, laakiin sidoo kale waxay muujineysaa hal-abuurka qoraaga. Isticmaal tilmaamaha jiirka si loo abuuro maaskaro taasi waxay qarxinaysaa meel kasta oo aynu haysanno.
Xiriirinta shabakadda: pixelot
Haddii aad rabto ku samee resume-kaaga khadka tooska ah wax aan intaas dhaafsiisnayn, Lionel wuxuu ku tusayaa jaranjarada. Qoraal ku habboon, sawirkaaga bidix ee sare, wuxuu ku xirayaa shabakadahaaga bulshada iyo khibradaada. Qaybta qurxinta kaliya ayaa ah labadaas sadar ee jiifka ah ee midabada kala duwan leh.
Xiriirinta shabakadda: Lionel scholtes
Xeebaha badda ee xarrago leh
Waan soo laabaneynaa si xarrago leh ee minimalism iyo meelahaas waaweyn ee maran. Dhinac marka laga eego, madaxa ayaa aad uga fog waxyaabaha kale ee jira, iyo dhinaca kale, astaamahaas oo u qaabeysan qaab ay ku abuuraan is afgarad muuqda oo weyn oo dhexdooda ah.
Xiriirinta shabakadda: Xeebaha badda ee xarrago leh
Sida aad ku arki karto tusaalooyinka oo dhan, waa muhiim tabs cinwaanka si ay u tagaan bogagga kala duwan ka socota bogga internetka. Qoraalku waa mid muhiimad weyn leh, ku ciyaar mid ka mid ah madaxa iyo mid kale oo loogu talagalay qoraalka oo leh 'san serif' oo shaqo weyn qabta.
Xiriirinta shabakadda: Lebensraum
Kala-duwanaanta midabada ayaa noo horseedaysa shabakad yar oo aad u adag oo ka kooban dhammaan aragtiyada. Dhamaan curiyeyaashaa waaweyn lama wada waayo in lagu ciyaaro markan shaxanka muuqaalka asalka iyo labadaas qaybood oo leh midabada ugu muhiimsan ee gradient-ka sawirka ugu weyn.
Xiriirinta shabakadda: PinkPoint
Sawir weyn oo leh font si fiican loo doortay iyo cunsur "geesi" ah waad siin kartaa shabakadan. Iyada oo la sixi karo waxay muujineysaa qeyb ka mid ah shaqada inay ahaato mid fudud uurkeeda.
Xiriirinta shabakadda: IWC
Sawirka dhijitaalka ah wuxuu noo keenayaa Chop Chop leh sawirkaas oo cunaya dhammaan muuqaalka muuqaalkiisa. Midabka buluuga ah ee cinwaanka wuxuu siinayaa dhibicdiisa si loo abuuro qiimayaal koromato ah oo la jaan qaada sawirka oo dhan ee shabakaddu saadaalisay.
Xiriirinta shabakadda: Chop Chop
7Pine wuxuu la ciyaaraa cagaarka si uu u noqdo jilaa weyn ee saxanka guriga. Inta soo hartay ayaa ka kooban sawir leh cagaar badan iyo madax fudud taasi waxay dooneysaa inay ogaato astaanta.
Xiriirinta shabakadda: 7Pine
Isugeynta waxay noo qaadaysaa jihooyin kale. Ku ciyaar madoowga madow iyo caddaan ah, sawir hal abuur leh taasina waxay la socotaa inta kale ee cunsuriyada ah iyo laba sawir oo kale si loo abuuro muuqaal ka xiiso badan. Tusaale si loo abuuro degel ka duwan inta kale.
Xiriirinta shabakadda: Wadarta
Buluuga ayaa ah midabka ugu badan ee kujira degelkan oo aan laga helin sawirro maqan oo si buuxda u iftiiminaya caddaanka iyo sida ciyaartu noqon lahayd 3D ee dhismaha goobtaas taasi way dhaqaaqdaa markaan dhaqaaqno.
Xiriirinta shabakadda: Koofiyadaha
Kara aada fududaan iyo minimalism oo leh joogitaankeeda dabiiciga ah iyo quruxda badan sawirkaaga. Inta soo hartay waa qoraal la socda waxa ay yihiin waxyaabaha ugu waaweyn ee madaxa iyo badhanka hamburger si loo furo.
Xiriirinta shabakadda: Kara lyte
Suuq Istuudiyaha Macallinka ah
Es ee shabakadda ugu fudud laakiin taasi waxay ina tusaysaa waxa ay tahay sameynta baloog. Casaan iyo madow waa halyeeyada ku jira degel "baloog" aad u tiro badan.
Xiriirinta shabakadda: Suuq Istuudiyaha Macallinka ah
Sida loo abuuro degel fudud HTML
Waanu ku barinaynaa sameyso degel fudud oo HTML ah si aad u ogaatid waxyaabaha aasaasiga ah ee curiya. Waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la helo martigaliye websaydh ah oo aan ku dhejin karno koodhka iyo xoogaa isbeddel ah CSS, laakiin kaalay, kuwani waa mabaadi'da lagu bilaabayo safarkayaga HTML.
Markuu qaar arkay tusaalooyinka websaydhka fudud Taas oo aad naftaada ku dhiirrigelin karto inaad sameysid naqshado adiga kuu gaar ah adiga oo aan wax badan madaxa kaa jabin. Mararka qaarkood kuwa fudud waxay abuuraan saameyn ka wanaagsan intii aan ku murgin lahayn waxyaabaha adag. Waxaad arki doontaa in kiisaska badankood fudud ay si fiican u shaqeeyaan. U tag.
Abuuritaanka degel fudud oo HTML ah ayaa ka fudud sida ay u muuqan karto marka hore. Degel wuxuu ka kooban yahay madax, jirka ama nuxurka iyo cagaha ama cagtu sida waxyaalaha ugu waaweyn. Waxaan u kala saari karnaa sidan:
Dukumentiyada: dhammaan dukumintiyada aan abuuri doonno waa in lagu sameeyaa a . Waxaan ku furaynaa a oo had iyo jeer ku xidha a
Jirka ama jirka: qaybta muuqata ee dukumintiga ayaa u dhexeeya Y
Madaxa: waxaa lagu yaqaan H1, H2, H3 ... Waxaan ku bilaabaynaa a waxaana ku xirmaynaa a . Qoraalka gudaha ku jira wuxuu u muuqan doonaa cinwaan ahaan waxayna kuxirantahay lambarkiisa wuxuu ku sameyn doonaa cabir yar ama ka weyn.
Baaragaraafyo: sadarka waxaa lagu lifaaqay a kuna xidha
Enlaces: tusaalaha ugu cad waa Isku xirka Creativos Online
Sawirro: waxaan ku qeexnaa iyaga sumadda . Tusaale ayaa noqon lahaa . Waxaan ku baryaynaa sawirka udhaxeeya calaamadaha sheegashada waxaanna u isticmaalnaa alt qoraalka kale, oo muhiim u ah SEO.
Liiska: waxaan ku qeexeynaa liisaska qasan iyo leh nidaamsan Waxyaabaha liistada ayaa lagu isticmaalaa . Had iyo jeer xasuusnow inaad ku xirto baarka.
Iyada oo cunsurradan ayaan lahaan doonnaa aasaaska u ah sameynta degel fudud sida aad ku arki doonto qaddarkooda wanaagsan ee aan ku bari doono qaybta xigta. Aynu nidhaahno qaab dhismeedka asalka ah ee leh waxyaabaha ugu muhiimsan wuxuu u eg yahay sidan:
Header oo ay bar bar ay loogu talagalay bogagga kala duwan ee goobta.
Maqaalka ama booska jirka taas oo aan ku abuuri karno gelitaanka barta, dhigno manhajkeena ama sawirkeenna.
Dhinac ama dhinac dhinac ah si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Lugta ama cagta, halkaas oo aan dhigeyno xiriiriyeyaal bogagga ugu muhiimsan ee goobta iyo sidoo kale astaamaha shabakadaha bulshada (had iyo jeer tusaale ahaan).
Tusaalooyinka aad hoosta ku arki doontid waa dhammaantood waxay ku saleysan yihiin astaan ​​fudud laakiin xarrago leh, cinwaan meesha ay dhigayaan hagidda bogagga kala duwan ee goobta, meel dhexe oo ay ku badan tahay qoraal ama sawir iyo lugayn leh walxaha ku xusan tuduca hore.
Waxaan ku talinaynaa taas madaxa ha ka jebin oo kuwa fudud u tag. Waxa ugu muhiimsan ayaa ah in aagaggaas laga soocay inta kale muuqaal muuqaal ah oo ilbiriqsiyo ah. Waqti kadib waxaan awoodi doonaa inaan isku mashquulino oo aan ka shaqeyno meelo kale oo badan.
Tani waa tusaale cad oo HTML code ah leh walxaha ugu muhiimsan:
Khadadkaan leh HTML code ayaan lahaan laheyn markii ugu horreysay wuxuu abuuray cinwaanka bogga cinwaanka leh, xaaladdan «Semantic HTML», waxaan ku xiri lahayn cinwaanka labadaba , cinwaanka leh oo waxaan fursad u siin lahayn inaan ku furno jirka .
Waxaan leenahay a cinwaanka koowaad ee H1 leh in lagu xiro , oo waxaan aadi lahayn liistada naga caawin doonta sidii loo abuuri lahaa baaxadda hagidda ee bogagga kala duwan ee boggeena. Waxaan ku xirnay liiska , waan xirnaa iyo ugu dambayn dukumintiga html oo leh .
Dhammaad, markasta la furo dukumenti in lagu xiro dhamaadka koodhka oo dhan adoo adeegsanaya. Kadib furitaanka dukumintiga, tixraaca luqadda marwalba waa la adeegsadaa, taas oo kiiskan ay tahay Isbaanish leh "es" iyo a .
Waa muhiim inaad si dhow u eegto lambarka iyo goor kasta waxaad fureysaa fure ku xir baarka u dhiganta
Waxaan galnaa CSS xoogaa, laakiin markaan gudubno si aad u fahanto sida loo qaabeeyo HTML. Aynu nidhaahno CSS iyo HTML waxay is barbar socdaan siinta websaydhyada fudud ee aad ka heli doontid hoosta.
Haddii dhinac ka mid ah aan haysanno adeegsiga macno ahaan HTML-ka maxaa u ah madaxa ama madaxa, jirka ama jirka oo leh maqaalkiisa ama sawirkiisa iyo lugihiisa, CSS dhexdeeda waxaan u isticmaali lahayn shaqada «Div» si loo aqoonsado mid kasta oo ka mid ah goobahan si hadhow loogu dabaqo isbeddelada lagama maarmaanka u ah naqshadeynta.
Wax fudud sida:
In kasta oo aan ku dabaqi karno qaababka Div, qaab dhismeed ku habboon oo qumman ayaa ku caawin doona si dadka gurguuranaya ay si fiican "u akhrin karaan" waxa ku jira waxa ku saabsan, markaa haddii aan raacno qaab-dhismeedka aasaasiga ah, waxaan heli doonnaa shaqo weyn iyo saldhig marka hore.
Un tusaale koodh CSS fudud ah:
Waxaan ugu yeernaa H1 iyo qoraalka waxaan ku dhejin doonaa midab cad oo midab leh: caddaan; oo waxaan ku toosin doonaa bartamaha «qoraalka align». Had iyo jeer ku xir qaanso ka dib furitaanka wicitaanka H1.
Sawir madax ah Greg rakozy
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » 30 Bogag Websaydh ah oo aad u fudud
Cristopher - degel dijo
Runtii sidoo kale waan jeclahay naqshadeynta, bog wanaagsan oo aan ku arko adduunka naqshadeynta.
Jawaab ku bixi Cristopher - bogga internetka
Waad salaaman tihiin sxb sidee tahay
Waxaan ku sameynayaa bog aad ufudud oo kujira html, waxaanan jeclaan lahaa inaan ku daro sanduuqa faallooyinka daabacaad kasta. Ma i hagi kartaa sida loo sameeyo?
Kuwa naga mid ah ee u baahan bog aad u fudud oo leh seddex badhan iyo sawir, xaalad walbana ciyaartoy, wax sidan oo kale ah ayaa faa'iido weyn yeelan lahaa.
Si kastaba ha noqotee ma aaminsani in macluumaadkaan aan awood u leeyahay inaan ku dhiso boggeyga, laakiin ugu yaraan waxay ku siinaysaa fikrado iyo waxa aad raadinayso